Literature News Ingxoxo noDrew Hayden Taylor | Izincwadi Zamanje
USilvia Serret | | Izingxoxo, Abalobi
Ngesikhathi sokwethulwa kwencwadi Izithuthuthu & Bison Grass ihlelwe okokuqala eSpain ngu Ukuhlelwa kwe-Appaloosa, U-Actualidad Literatura ukwazile ukubuza umbhali, uDrew Hayden Taylor. Futhi le noveli ebabazekayo yiyona edayiswa kakhulu eCanada, ngo-2010 yaba kowamanqamu emicimbini ehlonishwayo ye-Governor General's Literary Awards futhi ithembisa ukuthi izophumelela kakhulu eSpain.
Drew hayden taylorU-Ojibwa wasedolobhaneni lomdabu laseCurve Lake, eCanada, uhambe izindawo eziningi futhi ubhala ngombono wakhe woMdabu. Umbhali wombhalo ochungechungeni, intatheli, u-columinist, umhlekisi, umbhali wamanoveli nombhali wezindaba ezimfishane, lo mbhali unomsebenzi obanzi wokubhala lapho iziqu ezinjengezi Mina ngihlekisa (2006) futhi I-Night Wanderer: Inoveli YamaNdiya YamaGothi (2007) futhi Mina ngithandekile (2008).
Ukwethulwa kwencwadi kwenzeke eMadrid, esitolo sezincwadi esikhethekile emibhalweni yezokuvakasha Idolobha elingabonakali. Lo mbhali usichazelile ngomdlandla omkhulu ukuthi ziyini izingqinamba zakhe zemibhalo, yini emgqugquzela ukuthi abhale amanoveli nokukwazi kwakhe ukuhlekisa. Futhi njengoba izincwadi zomdabu zivame ukwethula izinto ezithile ezimangazayo, umnikelo okhethekile walo mbhali amahlaya abo nokuzimisela kwabo ukukhuluma ngempilo namasiko abo kepha ngezwi elijabule kakhulu.
Umbuzo: Uhambele kuziphi izindawo?
Impendulo: Sengike ngaba emazweni angaba ngu-18, ngimemezela ivangeli lezincwadi zomdabu. Bengilokhu ngikhona yonke indawo, kusuka eNdiya naseChina kuya eFinland naseJalimane.
P: Uma ungakhetha ukuya noma yikuphi kulo mhlaba (ongazi okwamanje), yini ongayikhetha?
R: I-Afrika neNingizimu Melika.
P: Waziwa ngamakhono akho amaningi: umbhali, usomahlaya, intatheli, umbhali wemidlalo. Zihlobene kanjani lezi zinto? Ngabe ucabanga ukuthi onke ayingxenye yekhono elifanayo noma ahlukile?
R: Ngizibona ngingumbalisi wezindaba wangaleso sikhathi. Noma ngabe ngibhala iskripthi se-TV, idrama noma inoveli. Kimi konke lokhu kubhekisa ekulandiseni indaba emnandi kunoma ngubani ongalalela noma afunde. Ngithanda ukusho ukuthi sesiqale ukukhuluma izindaba eziseduze nomlilo wokukhempa sazitshela esiteji noma esikrinini. Vele, umkhuba wangempela wokubhala kulezi zinhlobo ezahlukahlukene udinga, ngokomfanekiso, ukuzivocavoca imisipha ehlukene, kepha kimi konke kufana. Ngaphandle kwalokho, angiziboni ngingusomahlaya ngoba angikwenzi ukulingisa - ngikwenze kanye kuphela futhi bekumnandi. Ngincamela ukuzibona ngingusomahlaya, lokho kufana kakhulu nombhali obhala amahlaya.
P: Ngabe ucabanga ukuthi izindaba nokwenziwa kwamahlaya kuyefana ngokuthi zombili kumele zibe nento emangazayo, ngokwesibonelo, amanoveli noma amakholomu? Yini oyithandayo ngaphezulu?
R: Amahlaya yebo, kepha izindaba ezimfishane akunjalo. Ngifunde izindaba eziningi ezimfushane ezingenaso isiphetho noma uvuthondaba olumangazayo, kepha zibonisa kuphela izigcawu zansuku zonke ezivela empilweni. Esikhundleni salokho, amahlaya aludinga lolo shintsho oluzumayo; kufanele kuthathe indlela entsha nehlukile entweni ofuna ukuyinakwa. Kucishe kufane nefomula yezibalo: A + B kulingana D. Isakhiwo esiyisisekelo sayo yonke imibhalo yaseNtshonalanga ukuthi ophikisayo unenhloso futhi, endabeni enkulu, kumele anqobe uchungechunge lwezithiyo ukufeza noma hhayi inhloso yawo. Lokho kuvamise ukuba yingwegwe ekugcineni: bayifeza kanjani inhloso noma ukuthi bahluleka kanjani ukuzama. Futhi kunzima ukusho ukuthi hlobo luni lwentandokazi yami. Ngokusobala, bengingeke ngibhale kuzo zonke lezi zitayela ukube angizithokozelanga. Kodwa-ke, ngikholelwa ukuthi indawo yeshashalazi yindawo engiguqule ngaba ngumculi. Ngiyabathanda nabanye, kepha eCanada ngaziwa kakhulu njengomlobi wemidlalo.
P: Uqale nini ukubhala?
R: Ukuthengisa kwami ​​kokuqala kwangempela kwaba uchungechunge Ama-Beachcombers, uchungechunge lwezigigaba ezithatha imizuzu engama-30. Ingxenye yesithathu yabalingisi kwakungowomdabu, futhi kwenzeka ngenkathi ngicwaninga ukubhala i-athikili yomagazini ekhuluma ngokuguqula izindaba zomdabu kuthelevishini nakwifilimu. Ngixoxisane nomhleli futhi angazi noma bekungimi noma yena, kepha omunye wabo uphakamise ukuletha izindaba ezithile ukuze avivinye. Bengikwenzela ukuzijabulisa nje, futhi bangithengele. Ngibhalile ... futhi kwaqala kanjalo-ke.
P: Yini ekuheha kakhulu ngezincwadi?
R: Umbuzo onzima. Izincwadi zingikhanga kanjani? Ngicabanga ukuthi iyangikhanga ngoba kungithatha kungiyise ezindaweni eziyindumezulu engingase ngingeke ngikwazi ukuzihambela, izinhlamvu engingasoze ngakwazi ukuzifunda, nezimo lapho, okungcono noma okubi, engingasoze ngabandakanyeka khona. Kuyindlela yokuphila ezinye izimpilo futhi wenze izinto ezithokozisayo. Ngakho-ke ngithanda izindaba ezigxile kubo bobabili abalingiswa nesakhiwo.
P: Incwadi yakho oyithandayo?
R: Anginalwazi. Angithandi ukucabanga ngezintandokazi. Ngingumlandeli omkhulu kaTom King, uStephen King, uKurt Vonnegut Jr. nabanye abaningi. Okungidumazayo ukuthi ngokungangabazeki kunezinye izincwadi engingazithanda mhlawumbe engingakazitholi okwamanje. Usesho luyingxenye yobumnandi.
P: Umbhali ocabanga ukuthi uthonye kakhulu impilo yakho yombhalo?
R: Ngikholwa ukuthi njengoba ngangingu "Writer in Residence" eNative Earth Performing Arts, inkampani yokuqala yaseCanada iNative Theatre, ngesikhathi sikaTomson Highway, wayezoba ngomunye wabantu abanethonya elikhulu kimi. Kepha kukhona noTom King, u-O'Henry no-O'Neill.
P: Isiko lakho linamthelela muni ezincwadini zakho? Ngabe ucabanga ukuthi kunomehluko nendlela yokubhala yasentshonalanga?
R: Njengoba ngishilo embuzweni owedlule, ngizibona ngingumbalisi wezindaba wangaleso sikhathi. Ngikhule ngilalela izindaba futhi bengifuna ukuzenza. Kodwa-ke, njengomfundi, benginazo zonke lezo zindaba ezivela kude eza emphakathini wangakithi eCurve Lake, ngakho-ke bengifuna ukuletha izindaba ezivela emphakathini wangakithi emhlabeni wonke. Umehluko omkhulu phakathi kokuxoxa izindaba zomdabu kanye nesakhiwo sedrama yaseNtshonalanga ngumqondo womlingiswa ophakathi. Amanoveli amaningi nemidlalo yaseNtshonalanga ine-protagonist eyodwa, eneqoqo labalingiswa besibili abaseduze kwakhe. Ezindabeni eziningi, kodwa hhayi zonke, izindaba zomdabu, ngumphakathi oyinkanyezi futhi kungahle kube khona noma kungabi khona mlingiswa ophakathi. Umuntu akabalulekile ukudlula isigodi noma umphakathi.
P: Ingabe ujwayelene nombhalo waseSpain? Ufundile noma yimiphi imisebenzi yamanje yaseSpain?
R: Ngeshwa akunjalo. Akubanga khona ababhali abaningi baseSpain abafike endaweni yami yokugcina. Ngicabanga ukuthi kufanele ngijwayelane kakhulu nababhali baseSpain, ngokungangabazeki.
P: Ikhava yencwadi yakho Mina ngithandekile Kuyacaca ukuthi iyahlekisa, ngoba iyindlela enhle kakhulu yokuthengisa kakhulu ye-"soft" eroticism ("i-porn yomama"), evame ukukhombisa amantombazane agqoke kahle abhajwe ezingalweni zakhe yindoda enamandla, ebukekayo kodwa edelelayo. Ucabangani ngamanoveli walolu hlobo noma Amashumi amahlanu Amathunzi Ompunga?
R: Ngifunde ezimbalwa zalezo zincwadi ngenkathi ngicwaninga ngaleyo eseyi yencwadi. Ngiyasazi isitayela sakhe nokuqukethwe, kepha hhayi lokho Amashumi amahlanu Amathunzi Ompunga, yize bengilokhu ngimangazwa yilokho kuthatheka kwezothando emasikweni nakubantu bomdabu. Kuyiqiniso ukuthi sithandeka kakhulu, kepha kuyisilima impela. Hlanganisa Mina ngithandekile Kwakumnandi kakhulu futhi ngafunda okuningi emiqondweni yabanye ababhali.
P: Ucabangani ngesimo samanje semibhalo?
R: Lesi sikhathi sikhombisa izindaba ezithokozisayo futhi siyajabulisa ngempela. Ngethonya le-inthanethi kanye namathuba okushicilela enziwe atholakalayo ngale ndlela (ngokwesibonelo, ukubhuloga nokushicilela online), owaziyo ukuthi izinto zizohamba kuphi eminyakeni eyishumi noma engamashumi amabili ezayo! Ngicabanga ukuthi abantu, yize kunjalo ngefomethi, bazohlala benentshisekelo endabeni enhle. Futhi ngokuvulwa kweminyango emazweni angathuthuki kangako nakwamanye amasiko, izincwadi zingacebe kuphela futhi zithakazelise ngokwengeziwe.
P: Kuthiwani ngawe kubalingiswa be- Izithuthuthu neBison Grass?
R: Kukhona okuthile ngami kuzo zonke izindaba zami, kepha akuzona ezokulandisa. Kuyaxaka, ngoba abanye abangane bami bayaqiniseka ukuthi ngiyazifaka kukho konke engikubhalayo, kepha angivumelani nalokhu. Wayefana noVirgil ekhula. ULillian wayefana nogogo wami futhi njengabanye abadala engihlangane nabo. Ngicabanga ukuthi ngazama ukufaka ubuwula bami futhi ngakhazimula kuJohn neminye imibono yami yokungena kuWayne. Kepha ngifuna isithuthuthu esiyiNduna eyi-1953 yaseNdiya.
P: Ngabe ucabanga ukuthi usuvele ubhale umsebenzi wakho wobuciko?
R: Ungalokothi. Ukuphela kobuciko engizobhala ngabo kuzohlala kuyincwadi elandelayo engihlela ukuyibhala.
P: Uyini umsebenzi wakho olandelayo?
R: Nginezinhlelo ezimbalwa. Ngibhala iskripthi namazwi omculo omnandi weCharlettetown Festival ePrince Edward Island. Incwadi yami yama-24 kufanele ishicilelwe ngenyanga ezayo, inoveli yezithombe yeNoveli yami Umhambuma ebusuku, mayelana nevampire yomdabu. Futhi nginomdlalo omusha ozophuma ngonyaka ozayo obizwa ngokuthi UNkulunkulu nendiya. Ngihlela nokwenza okuthile okuhlanganisa izinkinga zomdabu nezinkinga eziqanjiwe zesayensi. Futhi mhlawumbe inoveli entsha.
Imininingwane engaphezulu - u-Alice Munro, 2013 owawina iNobel Prize
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » OKUKHETHEKILE: Ingxoxo Yamanje Yezincwadi noDrew Hayden Taylor